रोनाल्डो कि जोसेफ विकान : को हुन् सर्वाधिक गोलकर्ता ? | Ratopati
बिहीबार १३ फागुन, २०७७ Thursday, 25 February, 2021
रोनाल्डो कि जोसेफ विकान : को हुन् सर्वाधिक गोलकर्ता ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeमाघ ९, २०७७ chat_bubble_outline0
चेक रिपब्लिक फुटबल एशोसियसनले सर्वकालिन सर्वाधिक गोलकर्ताका रुपमा रोनाल्डोलाई मान्न अस्वीकार गरेको छ । देश र क्लबका लागि गरेर कुल ७ सय ६० गोल गरेका रोनाल्डोलाई विश्वकै सर्वकालिन गोलकर्ताका रुपमा धेरै सञ्चारमाध्यमहरुले प्रस्तुत गरेका थिए ।
यद्यपी, चेक रिपब्लिक फुटबल एशोसियसनले जोसेफ विकान विश्वकै सर्वकालिन महान् गोलकर्ता रहेको दाबी गरेको छ । विकानले करियरमा ८ सय २१ गोल गरेको एशोसियसनको दाबी छ । यद्यपी, मिडिया रिपोर्टहरुले विकानले ७ सय ५९ गोल गरेको रिपोर्ट पेश गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार यस सूचीमा ७ सय ५७ गोलसहित पेले तेस्रो स्थानमा छन् । ७ सय ४३ गोलसहित रोमारियो चौथो र ७ सय १९ गोलसहित लियोनेल मेस्सी पाँचौ स्थानमा रहेको समाचार अधिकांश सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो ।
यद्यपी, १९३१ देखि १९५५ सम्म -यापिड भियना र स्लाभिया प्रागबाट खेलेका विकानको गोलसंख्यालाई अवमुल्यन गरिएको एशोसियसनको दाबी छ । रोनाल्डोले विकानको किर्तिमान तोड्नका लागि अझै ६२ गोल गर्नुपर्ने एशोसियसनले जनाएको छ ।
यस विषयमा चेक फुटबल एशोसियसनको इतिहास तथा तथ्याङ्क कमिटीले छानविन गरिरहेको छ र यसबारे जारोस्लाम कोलारले भने, ‘जोसेफ विकान वा क्रिष्टियानो रोनाल्डो ? सहज प्रश्न र कठिन जवाफ किनकी विकानका सम्पूर्ण गोलहरुमध्ये तपाईंहरुले केवल आधिकारीकलाई मात्रै छान्नुपर्ने हुन्छ, जो कठिन छ । चेक फुटबल एशोसियनसनको इतिहास तथा तथ्याङ्क कमिटीले यस समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास थालेको छ ।’
के देखाउँछ अनुसन्धानले ?
कोलारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वेवसाइटहरु हेर्दा विकानले कुल ८ सय ५ गोल गरेको देखिन्छ र यसमा १९५२ को सिजन चेक दोस्रो डिभिजनमा राडेक क्रालोभका लागि उनले गरेका गोल समावेश छैनन् । ती, गोलको तथ्याङ्क हराइरहेको विषय वेवसाइटहरुले पनि उल्लेख गरेको कोलार बताउँछन् । ‘हामीले त्यो तथ्याङ्क फेला पारेका छौं र यो २६ खेलमा ५३ गोल हो । र, हामीले विकानले खेलेका लिग, कप र अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरुलाई डबल चेक गरेका छौं र त्यसपछि आधिकारीक गोललाई मात्रै जोड्दा पनि कुल ८ सय २१ गोल हुन आएको देखिन्छ ।’
उनी थप्छन्,‘यसको अर्थ क्रिष्टियानो रोनाल्डो अझैसम्म इतिहासका उत्कृष्ट गोलकर्ता होइनन् र उनले यो कीर्तिमान तोड्नका लागि अझै मेहिनत गर्नुपर्छ ।’
यसअघि पेले र रोमारियो दुबैले करियरमा १ हजारभन्दा धेरै गोल गरेको दाबी गरेका थिए ।
सिटीको लगातार १९ औँ जीत, रियल पनि विजयी
जिरुको ‘ओभरहेड’ किकमा चेल्सी विजयी, बायर्नको गोल वर्षा
मोनाकोसँग पीएसजी स्तब्ध
किसुनजीको नाममा चैत २२ गते हाफ म्याराथन हुने
हेटौँडामा ट्रकको ठक्करबाट सफारी चालकको मृत्यु
घर फर्किदै गरेका पत्रकारलाई बिनाकारण नियन्त्रणमा लिएर ४ घण्टा यातना
सत्ता समीकरणको रणनीति तय गर्न काँग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै
सैफ र अमृताको विवाहमा सामेल हुँदा करीना ११ वर्षकी मात्रै
घाटामा उड्डयन क्षेत्रः स्टल रुट र हेलिकप्टर कम्पनी थन्किने अवस्थामा